သုတ္ပိုး အားေကာင္းေစတဲ့ ထိပ္တန္း အစားအစာမ်ား - Thadin
HomeHEALTHYသုတ္ပိုး အားေကာင္းေစတဲ့ ထိပ္တန္း အစားအစာမ်ား
July 10, 2018 Admin Kwee HEALTHY 12
အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ကျန်းမာအားကောင်းတဲ့ သုတ်ပိုးများ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအတွက် အစားအသောက် အနေအထိုင်မှန်ဖို့က အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့ သုတ်ပိုးအားကောင်းစေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်လို့ ဂရုစိုက် စားသုံးသင့်ပါတယ်။
Dark Chocolate မှာပါဝင်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် အခြားဓါတ်များက သုတ်ပိုးအရေအတွက်ကို များပြားကာ အားကောင်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါမှာ orgasms ရရှိမှုကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ သို့သော် အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းက ဝိတ်တက်ခြင်းနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ပုံမှန် အနေတော် စားသုံးခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Zinc ဓါတ်က သုတ်ပိုးထွက်မှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ testosterone level ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကမာ၊ မုတ်ကောင်များဟာ Zinc ဓါတ် အလွန်ပေါကြွယ်ဝတာကြောင့် သုတ်ပိုးအားကောင်းဖို့ အစားသင့်ဆုံး အစားအစာထဲမှာ ပါပါတယ်။ testosterone level ကို မြင့်တင်ပေးတာကြောင့်လည်း ချစ်တင်းနှောရာမှာ လိုအပ်တဲ့ လိင်စိတ်ကိုတက်စေပါတယ်။ ကလေးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ည်း အခွင့်အလမ်းများတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်အီးဟာ ကျန်းမာအားကောင်းတဲ့ သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်မှုကို စွမ်းဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာတဲ့သုတ်ပိုးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အနေအထားများမှလည်း ကာကွယ်မှုပေးပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးမှာပါဝင်တဲ့ Bromelain လို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်းဟာ အမျိုးသားများအတွက် ကာမဂရာဂစိတ်ကို တိုးမြင့်စေပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်ဘီကြွယ်ဝလို့ သက်လုံအားကောင်းစေလို့ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အားအင်ပြည့်ဖြိုးနေစေပါတယ်။
ဖရုံစေ့စားသုံးခြင်းက testosterone ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို တိုးတက်စေပြီး အရေအတွက်များကာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ သုတ်ပိုးများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရလိုတဲ့ ဇနီးမောင်နှံများ စားသုံးပေးသင့်ကြောင်းလည်း မကြာခဏ တိုက်တွန်းလေ့ ရှိပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူကတော့ ကျန်းမာရေးကိစ္စအဝဝအတွက် မပါမဖြစ် အထိရောက်ဆုံး အရာတစ်ခုပါပဲ။ သို့သော် လူတော်တော်များများ မသိတာက ကြက်သွန်ဖြူဟာ သုတ်ပိုးအားကောင်းဖို့ အထောက်အကူ အများကြီး ပြုပေးတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကြက်သွန်ဖြူမှာပါဝင်တဲ့ allicin လို့ခေါ်တဲ့ compound ဟာ အမျိုးသားအင်္ဂါသို့ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေပြီး သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်မှု အရေအတွက်ကိုလည်း အားကောင်းစေပါတယ်။
မုန်လာဥနီမှာလည်း အာဟာရဓါတ်များစွာပါဝင်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ဗီတာမင်အေက သုတ်ပိုးထုတ်လွှတ်မှု တိုးတက်စေပါတယ်။ ဗီတာမင်အေ ကို မုန်လာဥနီ မှ ရရှိနိင်သလို Oatmeal (အုပ်ဂျုံ)၊ မက်မွန်သီးခြောက် နှင့် အနီရောင် ငရုတ်ပွသီးတို့မှလည်း စားသုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။
I’ve seen many bands and artists scorearecord deal onayear of
posting videos to Youtube. Premiere may too boil these
days; there is absolutely no reason flip to Adobe on this amazing. http://Www.Healthcarebuyinggroup.com/MemberSearch.aspx?Returnurl=http%3A%2F%2Fscr888.group%2Flive-casino-games%2F2482-lpe88-lucky-palace-casino
I’ve seen many bands and artists scorearecord deal on a
year of posting videos to Youtube. Premiere may too boil these days; there is absolutely no reason flip to
Adobe on this amazing. http://Www.Healthcarebuyinggroup.com/MemberSearch.aspx?Returnurl=http%3A%2F%2Fscr888.group%2Flive-casino-games%2F2482-lpe88-lucky-palace-casino
Yet it can beadefinite problem for Mac users other people that cannot really
download. Resume later and start from where you have
remaining. Slot Machine – This application has matching symbols. http://2ch.io/918.cafe%2Fhome%2Fmega888%2F50-mega888
Yet it can beadefinite problem for Mac users other people that cannot really download.
Resume later and start from where you have remaining.
Slot Machine – This application has matching symbols. http://2ch.io/918.cafe%2Fhome%2Fmega888%2F50-mega888
Visitors in many cases get annoyed that can’t enjoy the experience of visiting your website
and they simply leave. A lot of SEO content writers widely-used to churning out boilerplate pages. https://918.cafe/home/rollex-11/58-rollex11
Visitors in many cases get annoyed that can’t enjoy
the experience of visiting your website and they simply leave.
A lot of SEO content writers widely-used to churning out boilerplate pages. https://918.cafe/home/rollex-11/58-rollex11
Kudos, I appreciate it! Ahaa, its good dialogue regarding this article here at
very good. http://foxnews.net/
put in penning this blog. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as
El Viagra Hace Dano buy cialis Cialis Viagra Alcool
This Month : 36858
This Year : 232256
Total Users : 591280
Total views : 2712312